» नेपाल भारत सिमा विवादलाई लिएर केसी जोडीको घम्साघम्सी (भिडियो)
नेपाल भारत सिमा विवादलाई लिएर केसी जोडीको घम्साघम्सी (भिडियो)
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार २०:४१
हेटौँडा, २९ फागुन । मकवानपुरको हेटौँडामा आयोजित ‘राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला’ का अवसरमा हाँस्य कलाकारद्वय किरण केसी र शिवहरी पौड्यालले दर्शकलाई हँसाएका छन् । प्रहशनका क्रममा भारतीय सिपाही बनेका किरण केसी र नेपाली बनेका शिवहरी पौड्यालले दर्शकलाई निकैबेर हँसाएका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो–
किरण केसी सबैले चिनेका हाँस्यकलाकार हुन । उनको जन्म ललितपुरको इमाडोलमा २०१४ असार १५ गते भएको हो । दुर्गाबहादुर र इन्द्रकुमारीका उनी कान्छो र तेह्रौं सन्तान हुन् । उनले राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाँदा नै कलाकारिता सुरु गरेका थिए । वि.सं. २०२८ सालमा ‘धानका बाला इलरी–बिलरी’, गीतमा नाचेर उनी पहिलो पटक मञ्चमा पुगेका थिए । उनले अभिनय गरेको पहिलो टेलिफिल्म ‘मह सञ्चार’ को ‘१५ गते’ हो त्यस्तै उनको पहिलो चलचित्र शम्भु प्रधानको निर्देशनमा बनेको ‘सन्तान’ हो । केसीले अहिलेसम्म करिब २ सय ५० वटा टेलिफिल्म र ८५ वटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् ।
केसीले गोरखा दक्षिणबाहु, राष्ट्रिय पुरस्कारका साथै ४० जिल्लामा पुरस्कृत हुने मौका पाएका छन् । देशका ६५ जिल्ला घुमेका उनले विश्वका ३५ देशसम्म पुग्ने मौका पाएका छन् । उनले करिब तीन हजार पटक मञ्चमा गएर अभिनय गरेका छन् भने केसीका बारेमा ‘शब्दचित्रमा किरण केसी’ नामक पुस्तक २०६५ मा उनकै जन्म दिनमा छापिएको थियो । उक्त पुस्तक टीका ढकालले लेखेका हुन् । उनका दुई गीति एल्बम ‘ए राता मकै’ र ‘धरोधर्म माईली’ हुन् । (श्रोत–विकिपिडियाको सहयोगमा)
शिवहरि पौडेल वि.सं. २०४० सालतिर बाराको अमलेखगञ्जबाट राजधानी छिरेका कलाकार हुन् । कामसँगै पढाईलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा काठमाडौं छिरेका उनी बैंकका जागिरे थिए । सुरुमा आयल निगमको जागिरे भए पनि पछि उनले १० ठाउँमा एकैचाटी नाम निकाले र बैंक रोजे । त्यसबेला उनलाई खरदार र सुब्बाका सबै प्रश्न उत्तर कण्ठै थियो । बैंकको साढे पाँच सय तलब कोठा भाडा र क्याम्पस फी तिर्दा सकिन्थ्यो । पैसाको अभाव भएकाले उनी त्यस समय चलेका पत्रिका दुई रुपैयाँमा बेच्न क्लास नै छोडेर हिँड्थे जसबाट उनलाई १ रुपैयाँ नाफा हुन्थ्यो । यसरी सुरु भएको उनको यात्राले निकै फड्को मारिसकेको छ । उनले अनेकौँ चलाित्र, टेलिफिल्म र नाटकहरु खेलेका छन् ।